स्वस्तिमाले अझै पाएकी छैनन् ‘होस्टेल रिटर्न्स’ बाट पूरा पारिश्रमिक – E Kutumba
स्वस्तिमाले अझै पाएकी छैनन् ‘होस्टेल रिटर्न्स’ बाट पूरा पारिश्रमिक
विवाह गरेपछि अभिनेत्रीको करिअरले विश्राम लिन्छ भन्ने गरिन्छ । विवाहित अभिनेत्रीप्रति दर्शकको चासो नरहने विश्वासका कारण निर्माता/निर्देशक उनीहरुलाई फिल्ममा लिने हत्तपत्त आँट गर्दैनन् । विवाह गरेका अभिनेत्रीहरु कामविहीन भएका धेरै उदाहरण छन् । तर, यो भीडमा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का अपवादमा पर्छिन् । विवाहपछि नै उनको फिल्म करिअरले गति लिएको हो ।फिल्म ‘दुई रुपैयाँ’ को ‘कुटुमा कुटु’ गीतमा नृत्य गरेपछि दर्शकको ठूलो वर्गमा पुगेकी उनलाई ‘छक्का पञ्जा २’ ले सफलता दिलाएको छ । यसपछि उनले करिअर फर्केर हेर्नु परेको छैन । उनले फिल्ममा डेब्यू भने ‘होस्टेल रिटर्न्स’ बाट गरेकी थिइन् । त्यसबेला उनी अविवाहित थिइन् । फिल्ममा सहायक चरित्रमा भए पनि दर्शक तथा समीक्षकले उनको अभिनय रुचाएका थिए ।
५ वर्ष अगाडि प्रदर्शनमा आएको यो फिल्म स्वस्तिमाले १५ हजार पारिश्रमिकमा साइन गरेकी रहेछिन् । तर, अझै आधा पारिश्रमिक लिन बाँकी रहेको उनको भनाई छ । आफ्नो नाममा खोलेको यूट्युब च्यानलमा एक प्रशंसकले पहिलो फिल्ममा पाएको पारिश्रमिक खुलाउन गरेको आग्रहमा उनले आधा पारिश्रमिक लिन बाँकी भए पनि निर्माण टिमसँग कुनै गुनासो नभएको बताएकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘मैले १५ हजारमा पहिलो फिल्म साइन गरेको थिएँ । तर, अझै आधा पैसा लिन बाँकी छ । तर, यही फिल्मका कारण म यहाँसम्म आइपुगेको हुँ । पहिलो फिल्ममा धेरै कुरा सिक्न पाएको थिएँ । मलाई त्यतिबेला एउटा प्लेटफर्मको जरुरी थियो । त्यसैले निर्मातासँग कुनै गुनासो छैन ।’ यो फिल्मका निर्माता सुनिल रावल हुन्, जो अहिले अमेरिकामा बस्दै आएका छन् ।
अर्का प्रशंसकले फिल्म निर्माण गर्ने कुनै सोच छ ? भनेर सोधेको प्रश्नमा स्वस्तिमाले एकल लगानीमा फिल्म निर्माण गर्ने सोच नभए पनि शेयर भने हाल्न सक्ने बताएकी छन् । त्यस्तै, स्कूल लाइफमा कुनै शिक्षकसँग क्रस थियो ? भनेर एक प्रशंसकले सोधेको प्रश्नमा उनले भनेकी छन्, ‘स्कुलको शिक्षकसँग नभइ ट्यूसन टिचरसँग चाहिँ हल्का क्रस थियो । उहाँ म्याथ टिचर हुनुहुन्थ्यो ।’
लता मंगेशकरको घर सिल
चार लाख पारिश्रमिक लिने साम्राज्ञी म्युजिक भिडियोमा किन चलिनन् ?
कोरोना संक्रमित भएपछि श्वेताले भनिन्- चाँडै काममा फर्किनेछु
अभिनेत्री प्रियंका कार्की चलचित्र क्षेत्रमा फर्किने तयारी, शरीरको तौल घटाउँदै
जेनिश उप्रेतीले जिते ‘द भ्वाइस किड्स’को पहिलो उपाधि ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’को चौथो र…